Mampitandrina ny olom-pirenena ny UK, Australia ary Canada fa mety hisy ny fampihorohoroana ao Myanmar
Home » Fampihorohoroana sy heloka bevava ho an'ny mpandeha: » Mampitandrina ny olom-pirenena ny UK, Australia ary Canada fa mety hisy ny fampihorohoroana ao Myanmar
Grande-Bretagne, Aostralia sy Kanada dia niditra tao Etazonia nanoro hevitra ny olom-pireneny momba ny fanafihana mahery setra ao Myanmar.
Fampandrenesana voalohany ny Alarobia nataon'ny masoivoho amerikana tao Yangon nilaza ny mpitandro ny filaminana ao Myanmar fa “manadihady ny tatitra mety hisian'ny fanafihana” ao Naypyitaw renivohitra. Nilaza ny mety hisian'ny fanafihana hatramin'ny volana ho avy ao Naypyitaw, Yangon ary Mandalay, ireo tanàna telo lehibe indrindra ao aminy.
Na izany aza, tsy nisy fanazavana ny antony mety hisian'ny fanafihana amin'ny daty voafaritra amin'ny volana septambra sy oktobra. Tsy nisy ny tatitra fa nisy fanafihana nitranga ny alakamisy.
Ny mpanolotsaina kanadiana sy britanika dia namaritra fa mety ho fanapoahana baomba ny fanafihana mety hitranga. “Tsy nanamarina izany vaovao izany ny governemanta Myanmar. Tsy misy fepetra manokana atolotra amin'izao fotoana izao, ”hoy ny fanambarana navoakan'ny Birao Foreign and Commonwealth any Britain.
Foko maromaro mitam-piadiana no miady amin'ny governemanta Myanmar mba hahaleo tena bebe kokoa, saingy mazàna any amin'ny faritra fonenany no misy ny ady.
Ny mononta 'mbola tsy nisy toa azy' dia namono olona 59 farafahakeliny tany avaratr'i India
Ny sidina PM Pakistaney dia nanao sidina vonjy maika tao amin'ny seranam-piaramanidina JFK any New York